PUBG को नया अपडेट हेर्नुस, के - के छ ? – Namaste Khabar
PUBG को नया अपडेट हेर्नुस, के – के छ ?
June 25, 2020 Namastekhabar0Comments
धेरै टिजरहरू पछि, PUBG मोबाइल अन्ततः एक नयाँ मोड आयो, जसको नाम हो, “जंगल एडभेन्चर”। यस बाहेक, सान्ह्याक नक्शा र नयाँ मेकानिकहरू जस्ता सुविधाहरू यो लोकप्रिय खेलमा थपिएको छ । यो जंगल ठिम अपडेट मा जंगल फूड र तातो हवाका बेलुनहरू देख्न पाइन्छ, तर खेलाडीहरू भने यसलाई प्रयोग गर्न भाग्यशाली हुनुपर्नेछ, किनकि उनीहरू लाई जंगल एडभेनचार मोडमा जानको लागि रेन्दम चान्स पाउने छन् । यो अपडेट अन्द्रोइड र एप्पल दुवै उपलब्ध् छ ।
जंगल साहसिक मोड नयाँ सुविधाहरू
टोटम्स: जंगल एडभेन्चर मोडमा मिसटिरियस टोटम्स साथ PUBG मोबाइलको सनाहक नक्शा सिर्जना गर्दछ। टोटेमहरूले खेलाडीहरूलाई बिभिन्न “ब्लेसिंग्स” दिन्छन्। टोटेमको तीन प्रकारमा दिएको छ | पावर टोटेम्स, रणनीति टोटेम, र संरक्षण टोटेमहरू सामिल गरिएका छन्। उनीहरूको मद्दतले खेलाडीहरूले क्रमशः उनीहरुको हेलमेट र निहित, मर्मत, उर्जा पुनर्स्थापना र स्वास्थ्य मर्मत गर्न सक्षम हुनेछ। खेलाडीहरूले नक्शामा फरक ठाउँमा यी टोटेमहरू फेला पार्न र प्रार्थना गर्न सक्दछन्।
जंगल फूड: खेलाडीहरू जो सन्हाकको जंगल एडभेंचर मोडमा ड्रप गर्छन्। तिनीहरूले नक्साबाट विशेष फलहरू प्राप्त गर्नेछन्। मिस्टिंग इफेक्ट्स अनुभव गर्नका लागि उनीहरूले फलहरू खान सक्दछन्। जहाँसम्म, प्रभाव सकारात्मक वा नकारात्मक हुन सक्छ। यी अनियमित बफ र डिफहरू हुन् जसले खेलाडीहरूलाई स्वास्थ्य वा ऊर्जा पुनर्स्थापना गर्न अनुमति दिन्छ। थप रूपमा, तिनीहरू एयर ड्रपहरू बुझ्दछन्, वा उनीहरू चक्कर आउँदछन्।
हट एयर बेलुन: यस नयाँ गाडीको साथमा खेलाडीहरूले आकाशबाट रणभूमिमा सर्वेक्षण गर्न सक्नेछन्। यो जहाँ शत्रुहरूले एक जित प्राप्त गर्नेछन्।
जंगल एडभेन्चर मोड लाईभ बनाइसकेको छ। यदि Sanhok नक्शा पहिले नै डाउनलोड गरीएको छैन भने, तपाईं Map Selection Screen मा जान सक्नुहुन्छ र यो क्लासिक सेक्सनमा फेला पर्नेछ । यो अपडेट ११२ एमबी को हो, जुन नयाँ जंगल एडभेन्चर मोडको साथ आउँदछ। यदि तपाई मोडमा ड्रप हुनु भयो भने तपाईंको स्क्रिनको दायाँ कुनामा ‘Jungle Adventure’ लेखेको आउने छ ।
← स्वावलम्बन लघुवित्तको शेयर कारोबार फुकुवा
आज विभिन्न मुलुकबाट १२ सय जति नेपाली नेपाल भित्रिदई →
L.G.I को लिलामी सेयरमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
सुनको मूल्यले रेकर्ड ब्रेक एकैदिन तोलामा २ हजार २०० ले बढ्यो
सुन–चाँदीको भाउ १ हजार रुपैयाले आकासियो
March 22, 2020 March 22, 2020 Namastekhabar 0